Facebook သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသစ်ဖြစ်သည် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
နှင့်အတူတစ်စိတ်ကူးဆွေးနွေးမှုပြီးနောက် Justin Kistner သောကြာနေ့တွင် Facebook သည်ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုနှင့်အွန်လိုင်းစကားပြောဆိုမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းဗျူဟာကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးမီဒီယာမဟာဗျူဟာ၏အဓိကအချက်အနေဖြင့်ဘလော့ဂ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးလူမှုရေးမီဒီယာများမှချဲ့ထွင်ရန်အကြောင်းအရာများကိုမောင်းနှင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်၊ site နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသို့အသွားအလာကိုမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ မော်ဒယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ရုံသာမကဘဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Facebook ရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့မသိခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို boot လုပ်ပေးမလား။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲမှာပြောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။
မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Facebook ပလက်ဖောင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်မွေးစားနှုန်းများက Facebook ကိုသူကိုယ်တိုင် ဦး တည်ရာဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်နှင့်ဆိုက်မှကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းများကိုစတင်တည်ဆောက်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် Facebook သည်ဖြတ်သန်းသွားသည့်ကြားခံမဟုတ်တော့ဘဲ၎င်းသည် ဦး တည်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အမှန်မှာ၊ application အားလုံးကို embedded frames (iframes) ဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်သင်၏ site ကို 520 pixel wide frame ဖြင့်ကောင်းမွန်သော Facebook မှပုံတူကူးယူနိုင်သည်။ Wild Birds Unlimited အတွက်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီ တည်နေရာစနစ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်သိမ်းဆည်းပါ ဒါက Facebook ရဲ့အပြင်ဘက်ရှိအဓိကပလက်ဖောင်းမှစွမ်းအားပါ! ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးကို SSL ဖြင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ၀ န်ခံချင်တာကိုဝန်မခံချင်ဘူးဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ Facebook ကိုဘယ်လိုသုံးနေတယ်၊ ​​Facebook အတွင်းမှာကြော်ငြာခြင်း၊ အကြိုက် ဖောက်သည်များသို့။ တကယ်တော့ဒီနေ့ငါတို့ autofeed ကိုဖြတ်လိုက်ပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဲဒီမှာစကားပြောဆိုမှုစတင်နိုင်ပါသည်! လူတွေကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကနေထွက်ခွာဖို့ (သူတို့မထွက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ) နဲ့ငါတို့ site ကိုပြန်ကြိုးစားမယ့်အစားပိုပြီးခိုင်မာတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတွေနဲ့နံရံရဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲခြင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
BTW: ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်သောကားချပ်များကို client အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော Mindjet ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည် စိတ်မြေပုံ, စီမံကိန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီဇိုင်းကို Microsoft Office ကိုတင်းကျပ်စွာပေါင်းစပ်နှင့်အတူ!
Emailvision သည်အီးမေးလ်၊ လူမှုရေးနှင့်ဖောက်သည်ထောက်လှမ်းရေးကိုစတင်သည်